५७ करोडको सेयर कारोबार, बुटवल... :: कमल नेपाल :: Setopati
५७ करोडको सेयर कारोबार, बुटवल पावरमा आकर्षण
मंगलबार ५७ करोड ७७ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। यो रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब ३ करोड बढी हो।
कारोबारमा सामान्य सुधार देखिए पनि समग्र बजारको परिसूचक भने करिब २ अंकले घटेको छ। १. ९ अंकले ओर्लिएर नेप्से १५२४ अंकमा कायम भएको छ।
व्यापार, उत्पादन, बीमा र माइक्रोफाइनान्स उपसूचक बढेका छन्। व्यापार १ अंकमुनि, बिमा २७, उत्पादन ३ र माइक्रोफाइनान्स ६ अंकले बढे। बैंकिङ २. ९, होटल १७, विकास बैंक २, जलविद्युत १३, फाइनान्स १ र अन्य समूह २ अंकले घटे।
बुटवल पावर कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ। कम्पनीले यसअघि एफपिओ निश्कासनको स्वीकृति पाएपछि लगानीकर्ता तानिएका हुन्। जसले गर्दा कुल १० करोडको कारोबार भयो। बजार घट्दा पनि उसको मूल्य भने बढेको छ। प्रतिकित्ता १५ रुपैयाँले मूल्य बढेर ७४० कायम भएको छ।
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स संस्थापकतर्फको ६ करोड १७ लाखको कारोबार भयो। शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल बैंक र जनता बैंक कारोबारका आधारमा अगाडि रहे। सिनर्जी पावरका लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत नाफा कमाए।
रिलायन्स फाइनान्स, सिन्धु विकास बैंक, जेविल्स फाइनान्सका लगानीकर्ताले ४ प्रतिशत नोक्सान व्यहोरे। यसैबीच नविल बैंकका सिइओ शशि जोशीको राजीनामा स्वीकृति भएको जनाएको छ। कम्पनीको निर्देशकका रुपमा उपेन्द्रप्रसाद पौड्याल नियुक्त भएका छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १९, २०७४, ०४:१९:०५
ओप्पो एथ्रीएस अब २४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँमै
बैंकहरुले नउठेको ऋण घटाए
मंसिर १६ देखि जोशी हाइड्रोपावरको सेयर खुल्ने
ग्लोबल आइएमईको बित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न